Suuqgeyntaada Suuqgeyntu Uma Saxna Sida Aad U Maleyneyso | Martech Zone
Kaabayaashaaga Suuqgeyntu Uma Saxna Sida Aad U Malaynayso
Talaado, Oktoobar 22, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dad badan ma ogaadaan xaddidnaanta Analytics iyo barnaamijyada suuqgeynta ee cabbirka gaar ah martida. Inta badan barnaamijyadan waxay ku cabbiraan soo booqde iyadoo la dhigayo a cookie, Fayl yar oo loo gudbiyo mar kasta oo booqde ku soo laabto goobta isagoo isticmaalaya isla biraawsar. Dhibaatadu waxay tahay inaanan dib u booqan karin bartaada isla isla browser ama waan tirtiri karaa cookies-kayga.
Haddii aan ku booqdo bartaada taleefankayga gacanta, kaniiniga, laptop-ka iyo desktop desktop Waxaan hadda noqday 4 soo booqdeyaal gaar ah. Haddii aan nadiifiyo cookies-kayga dhowr jeer oo aan ku soo noqday boggaaga, waxaan noqday xitaa xitaa soo booqdeyaal gaar ah. MediaMind waxay adeegsataa farsamo la yiraahdo soo-booqdeha gaarka ah ee la hagaajiyay waxayna ku sharxayaan fiidiyowgaan - iyagoo adeegsanaya algorithm-ku-hagaajinta lahaanshaha xisaabaadkaaga dhagaystayaasha. Waxay ku sharaxayaan warbixinta xad-dhaafka ah ee soo booqdayaasha gaarka ah halkan:
Dhibaatadu ma ahan mid si fudud adiga kugu habboon Analytics, in kastoo. Waxay si aad ah u saameyneysaa aalado casri ah oo casri ah oo suuqgeyn ah oo loola socdo dabeecada booqdaha iyo tirakoobka dadka waqtiga. comScore waxay saadaalineysaa tirtirka cookie-ka inay tahay arin aad u balaaran. Laga soo bilaabo comScore, beegsashada saxnaanta adoo adeegsanaya cookies (% ra'yi dhiibashada si sax ah):
70% loogu talagalay 1 demo (tusaale ahaan dumarka)
48% loogu talagalay 2 demos (tusaale ahaan haweenka da'doodu tahay 18-34)
11% oo loogu talagalay 3 demos (tusaale haweenka da'doodu tahay 18-34 carruurta leh)
36% bartilmaameedka akhlaaqda
Tan looma jeedin in lagu liido adiga Analytics ama madal otomaatigga suuqgeyntaada. Kaliya waa erey digniin ah ku tiirsanaantaada qaababka soo sheegida sidan oo kale. Loogu talagalay suuqleyda, tani waa meesha ay ku yaalliin meheradaha dhinac saddexaad iyo isdhexgalka ay si sax ah u bartilmaameedsan karaan booqdayaashaada dhexdhexaadinta iyo kal-fadhiyada. Haddii aad uga baahan tahay booqdahaaga inuu ku soo galo shabakadda, barnaamijka moobiilkaaga, ama wixii kale ee is-dhexgal ah - waxaad si fiican u bartilmaameedsan kartaa booqdayaashaas oo aad si sax ah u xallin kartaa tirada runta ah gaar ah Kooxda martida ah.
Macluumaadka isdaba jooga ah ayaa aad muhiim ugu ah markaad adeegsato cabirradan. Xadgudubka qaladka ee dhexdhexaadiyeyaashu si weyn ugama beddeli doonaan - markaa waqti ka dib haddii booqdahaaga gaarka ah ee tirinta uu kor u sii kacayo, markaa waxaad samaynaysaa waxa saxda ah. Haddii aysan ahayn, waxaad u badan tahay inaad haysato xoogaa shaqo ah oo aad qabato.
Tags: booqde u gaar ahisku-dhafandhexdhexaadinBooqashooyinka Gaarka ahraadinta booqdahadadka soo booqda
Oktoobar 23, 2013 at 9:49 AM
Waad ku mahadsantahay wadaagida Doug! Runtii waa aqrin weyn waxayna iga dhigtay inaan ka fikiro! ..
nyfv Dhawaan waxaan dhab ahaan hoos ugu dhacay lacag caddaan ah oo deynta ayaa i cunaysay dhinac walba. taasi waxay ahayd ilaa aan ka bartay lacag soo saarista .. oo ah INTERNET-ka. Waxaan booqday shabakada dhibic samaynta, waxaanan bilaabay buuxinta xog uruurinta lacagta, runtiina waxaan awooday inaan kufaano dhaqaalaheena !! Waan ku faraxsanahay inaan waxan sameeyay .. mKBu